असार १५, २०७५ शुक्रवार ०७:५५:१२ प्रकाशित
काठमाडौं- 'मानो रोपेर मुरी फलाउने दिन' अर्थात् आज असार १५। कृषकहरुले काम गर्दै दहीचिउरा खाएर मनाउने यो दिन गैरकृषकका लागि भने ‘खाने पर्व’का विकसित हुँदै गएको छ।
सांस्कृतिक महत्व बोकेको दहीचिउरा स्वास्थ्य दृष्टिकोणले कस्तो छ? कसले खाँदा फाइदा हुन्छ? कसरी खाँदा स्वास्थ्यलाई लाभ पुग्छ? लगायतका विषयमा पोषणविद् सोफिया उप्रेतीसँग सिर्जना खत्रीले गरेको कुराकानीको संपादित अंशः